The World Nepal News | प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधिमा प्रदेश १ लाई
संवाददाता | २०७७ पुष १९, आईतवार
दाङ/ प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश नं. १ ले जितेको छ । दाङको लमहीस्थीत राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको फाइनलमा खेलमा सशस्त्र प्रहरीको विभागीय टिम एपिएफलाई ६ रनले हराउँदै प्रदेश १ ले उपाधि हात पारेको हो । उपाधिसँगै बिजेता प्रदेश १ ले नगद पाँच लाखसहित शिल्ड, प्रमाणपत्र जितेको छ । भने उपविजेता एपिएफले नगद तीन लाख रुपैयाँसहित शिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । जितको लागि १ सय ६ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउने क्रममा एपिएफले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै ९९ रनमा सिमित भएको थियो । अन्तिम ओभरमा एपिएफलाई जितको लागि १३ रन आवश्यक थियो । प्रदेश नं. १ की खेलाडी संगीता राईले २ विकेट लिँदै ६ रन खर्चेपछि प्रदेश एक च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो ।
अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा ममता चौधरीलाई २ रन दिएकी थिइन् । दोस्रो बलमा ममता चौधरी दुई रन लिनेक्रममा रन आउट भएपछि खेल थप रोमान्चक बनेको थियो । तेस्रोबलमा सीता रानामगरले दुई रन लिँदा चौथो बल डट राखेकी थिइन् । पाँचौ बलमा सीता स्टम्पिङ आउट भएपछि नतिजा प्रदेश १ को पक्षमा गएको थियो । अन्तिम बलमा संगीताले एक रन दिँदै खेल जिताइन् ।
ममता ४७ बलमा ३४ रनमा रन बनाउँदै आउट भएकी थिइन् । करुणा ३६ बलमा १ चौकासहित २६ रनमा अविजित रहिन् । एपिएफलाई जितको लागि अन्तिम १२ बलमा १७ रन चाहिएको थियो । सबनम राईले १९ औं ओभरमा ३ रन खर्चेपछि खेल रोमान्चक बनेको थियो ।
छैटौं ओभरमा युवा स्पिनर अलिसा खदियाले दुई महत्वपूर्ण सफलता दिलाएपछि एपिएफको जित कठिन बनेको थियो । पहिलो बलमै सरिता मगरलाई ६ रनमा एलबिडब्लू आउट गरिन् । अन्तिम बलमा ज्योती पान्डेलाई १४ रनमा एलबिडब्लू आउट गरेपछि एपिएफ पहिलो पावर प्लेमै २९–४ को कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । सातौं ओभरको पाँचौं बलमा सोनु खड्कालाई रोमा थापाले १ रनमा रन आउट गराएपछि एपिएफ संकटमा परेको थियो । एलिसा खदियाले ४ ओभरमा १३ रन खर्चेर २ विकेट लिइन् ।
कप्तान रुविनाले ४ ओभरमा १४ रन खर्चेर २ विकेट लिइन् । संगीता राईको नाममा एक विकेट रह्यो । प्रदेश १ की ओपनर अप्सरी बेगमले ४५ बलमा ५ चौकासहित सर्वाधिक ३४ रनको योगदान दिइन् । विकेटकिपर काजल श्रेष्ठ २६ बलमा ३ चौकासहित २९ र संगीता २ रनमा अविजित रहिन् ।
ओेपनर अप्सरी र कप्तान रुविना क्षेत्री बेलबासेले पहिलो विकेटका लागि १२.४ ओभरमा ५८ रनको साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुवात दिलाएकी थिए ।१७ औं ओभरको तेस्रो बलमा सीताले रोमा थापालाई ३ रनमा ू आउट गरिन् । १९ औं ओभरको चौथो बलमा करुणा भण्डारीले निसा शाहलाई ५ रनमा बोल्ड आउट गरेकी थिइन् । सीता राना मगरले ४ ओभरमा १७ रन खर्चेर ३ र करुणा भण्डारीले १ विकेट लिएका थिए ।